Iji mee ka ikike nyocha ihe nyocha, lee otu ị ga-esi kwaga na ntanetị ọhụụ ọhụụ:
Ọ bụrụ na ị na-agagharị ngalaba ma ọ bụ subdomains, ọ ka nwere ike ibugharị gaa na adreesị blog ọhụrụ. Kwadoro: Achọpụtala m na ndị ahịa na-efunahụ ụfọdụ ogo ha mgbe ha na-eme subdomains mana ha na-enwe ike ilaghachi azụ ngwa ngwa. Gbanwe ngalaba kpamkpam nwere ike inwe oke mmetụta. M ga-anwa zere nke a n'agbanyeghị ụgwọ.
Nyochaa Njikwa Nchọta Google na Webmaster nke Bing maka ibe ndị a na-ahụghị wee mezie ha. Echegbula ịlele ụbọchị ọ bụla - ọ ga-ewe otu izu ma ọ bụ abụọ tupu ị hụ akwụkwọ nyocha
Site n'ịhụ na ebutegharịrị ọdịnaya gị, ọ bụghị naanị na ị ga - ahụ na ndị ọbịa ka nwere ike ime ya na ọdịnaya ha na - achọ, ị ga - ewepụta obere peeji 404 Not Found peeji nke. Otu ihe edetu na nke a… nye Webmasters otu izu ma ọ bụ abụọ iji jide ha! Mgbe i ghazighara adreesị ọjọọ ndị ahụ, ọ gaghị edozi ha ozugbo na Webmasters (Amaghị m ihe kpatara ya!).